စာပဒေသာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 507
သူ့လူ (ကာရိုလိုင်းနား) ဇန်န၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၃ ငါ့ကိုလဲချစ် သူ့ကိုလဲချစ် အလှကိုလဲချစ် ဘဝကိုလဲချစ် အပြုံးကိုလဲချစ် အမုန်းကိုလဲချစ် အဖြူကိုလဲချစ် အမဲကိုလဲချစ် အနီကိုလဲချစ် အညိုကိုလဲချစ် အပြာကိုလဲချစ် အစိမ်းကိုလဲချစ် အလင်းကိုလဲချစ် အမှောင်ကိုလဲချစ် ငွေကိုလဲချစ် ရွှေကိုလဲချစ် ကြေးကိုလဲချစ် သံကိုလဲချစ် တောကိုလဲချစ် တောင်ကိုလဲချစ် ကောင်းကင်ကိုလဲချစ် မြေကြီးကိုလဲချစ် အသစ်ကိုလဲချစ် အဟောင်းကိုလဲချစ် အနုကိုလဲချစ် အကြမ်းကိုလဲချစ် အများကိုလဲချစ် အနည်းကိုလဲချစ် မွှေးတာကိုလဲချစ် နံတာကိုလဲချစ် ချိုတာကိုလဲချစ် ခါးတာကိုလဲချစ် ပေါ့တာလဲချစ် ငန်တာလဲချစ် နိုင်တာလဲချစ် ရှုံးတာလဲချစ် ရှင်တာကိုလဲချစ် သေတာကိုလဲချစ် သြော် အချစ် အချစ်… တဏှာဖြစ်တဲ့ ဒီအချစ်များ အစွန်းထိ လွန်သွားတာတွေကြောင့် စစ်နွံထဲမှာ ခုထိကျွံနေကြရ။ ။ No...
ကဗျာဆရာကြီး ဦးတင်မိုး ကွယ်လွန်ခြင်း ၆ နှစ်ပြည့် အမှတ်တရစာအုပ် ထွက်မည် မိုးမခစာအုပ်စင်၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၃ လာမယ့် ဇန်န၀ါရီ ၂၂၊ ကဗျာဆရာကြီး ဦးတင်မိုး ကွယ်လွန်ခြင်း ၆ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မြန်မာပြည်က ပဉ္စရူပစာအုပ်တိုက်က ဆောင်းပါးပေါင်းစုံစာအုပ် ထုတ်ပါမယ်။ ဇန်န၀ါရီ ၂၁ မှာ ပြည်တွင်းက စာအုပ်ဆိုင်များကို ဖြန့်ချိမယ်လို့ သိရပါတယ်။ စာရေးဆရာပေါင်းစုံက ဆရာကြီးအကြောင်း အမှတ်တရရေးသားထားတာတွေကို စုစည်းထားပြီး ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများစွာလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်အတွက် ထုတ်တာမဟုတ်ဘဲ စာအုပ်က ရောင်းရငွေအကျိုးအမြတ်တွေအားလုံးကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ နဲ့ မိသားစုများ စောင့်ရှောက်မှု ပြုလုပ်နေတဲ့ ဦးဝင်းတင်ဖောင်ဒေးရှင်းကို လှူဒါန်းမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီသတင်းရေးနေချိန်မှာ စာအုပ်ခေါင်းစဉ်နှင့် မျက်နှာဖုံးကို အချက်အလက် မရရှိသေးလို့...
နှင်းဆီ … ရတု
ကမာပုလဲ ဇန်န၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၃ ရင်ဘတ်ထဲ ကဗျာတွေထည့်သွား လက်ထဲမှာ ကဗျာစာအုပ် တအုပ်လောက် ဆောင်သွား လမ်းတွေပေါ်မှာ လူထုကဗျာတွေကို ခံစားသွား ခု ဆို စစ်ကိုင်းတံတားဟာ နှင်းတွေထဲ နစ်နေမလား လက်ပန်းတောင်း ဒေသဟာ ၀ပ်ကျင်းထဲမှာ ဝေဒနာနဲ့ တိုက်ပွဲပြန်စဖို့ ပြင်နေသလား တနှစ်ပြည့် အချစ်ဟာ တသက်စာ ဖြစ်စေ ဒီနံနက်ခင်းမှာ မောင့်နှင်းဆီ ဘယ်လိုအလွမ်းမျိုးနဲ့ ပွင့်နေမလဲ ရန်သူနဲ့ စကားပြောပြီးရင် ရန်သူနဲ့ တွဲကတတ်ဖို့ ရက်ဘတ္တလာနဲ့ စကားလက်အိုဟာရာထံမှာ ဝေါ့ဇ်အက သင်တန်းတက်ကြ အချစ်ရေ ဒေါသမသင့်ခင် ဒီကဗျာအဆုံးသတ်မှ ဖြစ်မယ် … မင့်ကို ချစ်ရတဲ့ အထဲမှာ မြေကြီးဆန်တဲ့ မင်းနှလုံးသားကြောင့်လဲ ပါတာပေါ့ ကချင်မှာ ကလေးတွေ နှင်းထဲ...
ပြင်သစ် ဘာသာ လေ့လာစရာ (အပိုင်း ၂၊ ပထမပိုင်း) ပါရီမောင်၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၃ (အပတ်စဉ် တက်ဆက်မည်) LESSON -2 ARTICLE Part ( 1 ) 1 . Undefinate Article (Article indéfini) (အာ တိကလ် အန် ဒေးဖိ နိ ) ဟု ၂ မျိုး ခွဲနိုင် ။ ( English နှင့် ယှဉ်၍ ရနိုင်ပါသည်။)2. Definate Article (Article défini) ( အာ တိကလ် ဒေးဖိ နိ...
Amazon Kindle App နဲ့ သန်းဝင်းလှိုင်၏ အကျော်ဇေယျအမျိုးသမီးများ အီးဘုတ် ဖတ်နိုင်ပါပြီ မိုးမခစာအုပ်စင်၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၂ မိုးမခရဲ့ အွန်လိုင်းအီးဘုတ်အုတ် ထုတ်ဝေရေးအစီအစဉ်ကနေ Amazon Kindle e-book store ကနေ ထုတ်ခဲ့သမျှစာအုပ်များကို ထပ်ဆင့်ဖြန့်ချိနေရာမှာ သန်းဝင်းလှိုင်ရဲ့ စာအုပ် ၂ အုပ်ဖြစ်တဲ့ အာဇာနည်နေ့ စာအုပ်နဲ့ အကျော်ဇေယျအမျိုးသမီးများ (အတွဲ ၂တွဲ) စာအုပ်များကို Kindle အီးဘုတ်အဖြစ် တင်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ လက်ရှိမှာ အဆိုပါ အီးဘုတ် ၂ အုပ်ကို အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် ဖတ်ရှုနိုင်အောင် ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ (www.Amazon.com) အမေဇုံအွန်လိုင်းဝက်ဆိုက်မှာ မိမိအီးမေးနဲ့ မှတ်ပုံတင် အကောင့်တခု ရယူပြီးနောက် လိုချင်တဲ့ အီးဘုတ်ကို 0.00 ဒေါ်လာပေးပြီးတော့ check...
အချစ်အကြောင်း ပြောကြည့်ခြင်း အောင်ဒင်၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၃ ညီလေးရေ တစ်ယောက်ယောက်ကို မင်း ချစ်မိတဲ့အခါ ဘဝဟာ အခုမှပဲ အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံလာသလို ပါတ်ဝန်းကျင်ဟာ အခုမှပဲ လှပလာသလို ရှူရှိုက်နေကျ လေဟာ အခုမှပဲ ပိုပြီး လတ်ဆတ်လာသလို နေ့တွေ ညတွေဟာ အရင်ကထက် တိုတောင်းပြီး ကုန်ဆုံးမြန်သလို မင်း ခံစားရမှာပေါ့၊ မနက်ခင်းမှာ ပွင့်တဲ့ စပယ်ပန်းတွေ သူဆင်မြန်းဖို့ မင်းသီကုန်းပေးချင်လိမ့်မယ် ခြောက်သွေ့တဲ့ နွေရဲ့ အပူညတွေမှာ မင်းသူ့ကို အေးမြစေချင်လိမ့်မယ် နှင်းဖုံးလွှမ်းတဲ့ တောင်တန်းကြီးပေါ်ကနေ သူ့အမည်ကိုခေါ်ရင်း မင်းလွမ်းဆွတ်နေလိမ့်မယ် သူ့အနားမှာ အတူတကွရှိနေနိုင်ဖို့ မင်းဆန္ဒပြု ဆုတောင်း မိလိမ့်မယ်၊ ကိုယ်က ချစ်ရရုံသက်သက်နဲ့တော့ အချစ်ဆိုတာ မပြည့်စုံဘူးပေါ့ကွယ် တောင်ပေါ်က အော်ဟစ်လိုက်တဲ့ အသံလို...
ကမာပုလဲ ဇန်န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၃ ကျနော်ဟာ ချုပ်ရိုးတကြောင်းပါ ဆန္ဒနဲ့ ဘ၀ကြားမှာ နေတယ် …။ ကျနော်ဟာ ချုပ်ရိုးတကြောင်းပါ ချစ်သူနဲ့ မုန်းသူကြားမှာ ရပ်လျှက် …။ ကျနော်ဟာ ချုပ်ရိုးတကြောင်းပါ ဟိုမှာဘက်ကမ်းနဲ့ ဒီမှာဘက်ကမ်းကြားက တံတားကလေး …။ ကျနော်ဟာ ချုပ်ရိုးတကြောင်းဖြစ်တယ် ကျနော်ဟာ ချုပ်ရိုးတကြောင်းဖြစ်ပါတယ် ချစ်သူပစ်ထားခဲ့မှာကို သိပ်ကြောက်တဲ့ အိပ်မက်ကလေးပေါ့ ကျနော်ဟာ ချုပ်ရိုးတကြောင်း ဖြစ်တယ် …။ No tags for this post.
ကျော်မိုး (စကားဝါမြေ) ဇန်န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၃ “ဟလို!!! မေကြီး သမီး နဲ့ သား နေကောင်းလား…မေ ? “ “အားလုံး နေကောင်းကြတယ်…ကို”။ “ဖေကြီးကော…ဟင် ? အဆင်ပြေလား ? နေကောင်းလား…ကို ? “ “အားလုံး အိုကေ အဆင်ပြေတယ်… ဖေကြီး ခုဘဲ ငွေလွှဲလိုက်တယ်” “ဘယ်လောက်လဲ…ကို ? ခါတိုင်းလိုလား ? ပိုသေးလား…ဟင် ? ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ လစဉ်ငွေထက် ပိုစေချင်”။ “ခါတိုင်းလို ဘဲ လွှဲလိုက်တယ်…မေ ငွေဈေးကျပြီး ကားခ ဖုန်းခ အိမ်ငှားခနဲ့ စားစရိတ်က စလုံးကိုးရာ သာသာ ကုန်တာ မေ… လာလည်စဉ် မြင်တယ်မို့လား ? သောက်စား ပျော်ပါး...
Page 507 of 564«1...505506507508509...564»
ဇာနည်သွေး (ပလိပ်) ● ထိတ်လန့်ညစွဲများ
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ခေတ်နှစ်ခေတ် https://t.co/b99qCkfel9 https://t.co/TYh7t845UP about 15 hours ago ReplyRetweetFavorite